नेपाल आज | यी मन्त्रीहरु सिन्कै भाँच्दैनन् तर पनि हुँदैन आलोचना
यी मन्त्रीहरु सिन्कै भाँच्दैनन् तर पनि हुँदैन आलोचना
काठमाडौं । वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सबैभन्दा बढी आलोचना वा गालीको वर्षा कुन मन्त्रीविरुद्ध होला ? निश्चय नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पर्छन् । उनले गर्न खोजेका केही काम विवादास्पद हुन पुगे । त्यसमाथि उनको बोल्ने शैलीले उनी आफैंलाई आलोचित बनाइरहेको छ ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटा मात्रै होइन आलोचना खेप्ने वा सामाजिक सञ्जालमा निकृष्ट शब्दसहितको गालीको वर्षा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, खानेपानीमन्त्री विना मगरलगायतविरुद्ध आलोचना बढी हुने गर्छ ।
आलोचना पाउनका लागि पनि केही गर्नै पर्ने रहेछ । पद ओगटेर बस्ने, मन्त्रालयको कुर्सी पुरानो बनाउने र सिन्को भाँच्ने काम नगर्ने हो भने त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई आमजनताले आलोचना गर्न पनि आवश्यक ठान्दा रहेनछन् ।
राम्रो काम गरेका कारण कहिले पनि चर्चामै नआउने सामान्य प्रशासन, वन जस्ता मन्त्रालय पनि विगतमा सबैको नोटिसमा परेका थिए । ग्रिनकार्ड र पिआरसम्बन्धी ऐनका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लालबाबु पण्डीतले चर्चामा ल्याइदिएका थिए । रक्तचन्दन समातेर मातृका यादवले वन मन्त्रीको शक्ति देखाएका थिए ।
तर अहिले वन मन्त्रालय सम्हालिरहेका शक्तिबहादुर बस्नेतको दशा हेर्ने हो भने दया लाग्ने प्रकृतिको छ । हुन त यिनी गृहमन्त्री नै हुँदा पनि यिनको कार्य दक्षता शुन्य बराबर थियो । असक्षमलाई भारी बोकाउनु भनेको भारकै बेइज्जत जस्तो शक्ति बस्नेतको हकमा भएको छ । जंगलबाट झिकिएका काठलाई पनि उत्पादनको रुपमा व्याख्या गरेर बस्नेतले आफ्नो काम देखाउने प्रयत्न गर्छन् ।
शक्ति बस्नेतले मन्त्रालय सम्हालेयता के के काम गरे उनी स्वयंलाई पनि थाहा छैन होला । किनभने कुनै काम गरेकै छैनन् । मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने, दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक शक्तिको अर्को धन्दा केही छैन । जसका कारण यिनले कुनै आलोचना सहनु पर्दैन ।
अर्को मृत प्रायः मन्त्रालय हो कृषि । कृषिमन्त्री छन् चक्रपाणि खनाल । किसानको कोटामा चीन भ्रमण गएपछि यिनी विवादमा आए । बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामा यिनले दुई चार सय वटा बाख्राका पाठा उत्पादन भएको उल्लेख गरेका थिए । कालिमाटी तरकारी बजारमा अनुमगन गर्न गएर यिनले एक पटक स्टन्ट पनि गरेका थिए ।
अर्काछन् मोहम्मद इश्तियाक राई । यिनी सहरी विकास मन्त्री हुन् । यिनलाई पनि कसैले आलोचना गर्दैनन् । किनभने यिनको कुनै काम नै देखिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार । समावेशीका लागि यिनलाई मन्त्री बनाइएको हो । दयामायाले पाएको पद भएर पनि हुन सक्छ यिनले पनि आफ्नो दक्षता देखाउन सकेका छैनन् । यिनको काम धुर्मुस सुन्तलीले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाएर गरिदिँदै छन् ।
ख्रुश्चेभले वीपीलाई भने– ‘तपाईंका प्रतिनिधि पश्चिमा शक्तिका एजेन्ट हुन् ।’
नेता चिनेको, जनता नचिनेको संविधान
संविधानसंगै आचरण सुधारको खाँचो